ရီးယဲလ်အသင်းမှာ အီဘရာဟီမိုဗစ်ကို မြင်တွေ့ရတော့မလား
23 Oct 2018 . 5:28 PM
ရီးယဲလ်အသင်းဟာ အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကို အားဖြည့်ဖို့အတွက် လာမယ့်ဇန်န၀ါရီကျရင် LA ဂလက်ဆီအသင်းရဲ့ ဆွီဒင်ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူး အီဘရာဟီမိုဗစ် Zlatan Ibrahimovic ကို ခေါ်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေ ထွက်နေပါတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ အဓိက တိုက်စစ်မှူး စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ကို ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဆီ ရောင်းချပြီးကတည်း တိုက်စစ်ပိုင်း အားနည်းမှုနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီး ဒီရာသီမှာ ဂါရတ်ဘေးလ် Gareth Bale ၊ ဘန်ဇီမာ Benzema ၊ မာရီယာနို Mariano ၊ အဆန်စီယို Asensio တို့ဟာ (၁၂)ပွဲကစားပြီးချိန်မှာ အားလုံးပေါင်း (၁၈)ဂိုးသာ သွင်းထားတယ်။
လီဗန်တေးနဲ့ပွဲမတိုင်ခင် ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ဆိုးရွားတဲ့ ဂိုးပေါက်ပျောက်မှု မှတ်တမ်းကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာကြောင့် ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေက တိုက်စစ်ပိုင်းကို အားဖြည့်ဖို့ တောင်းဆိုနေကြပါပြီ။ အဲဒါကြောင့် လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလဆိုရင် LA ဂလက်ဆီနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မယ့် အီဘရာဟီမိုဗစ်ကို ခေါ်ပြီး တိုက်စစ်ပြဿနာကို ယာယီဖြေရှင်းဖို့ ရီးယဲလ်အသင်းက ဆန္ဒရှိနေတာပါ။ အသက်(၃၇)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့် အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းတွေကို ပြသနေဆဲဖြစ်သူ အီဘရာဟီမိုဗစ်ဟာ LA ဂလက်ဆီအသင်းအတွက် (၂၆)ပွဲကစား (၂၂)ဂိုးသွင်းထားပြီး အခုလောလောဆယ် မေဂျာလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဒုတိယသွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားအဖြစ် ရပ်တည်နေတယ်။
အီဘရာဟီမိုဗစ်ဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ ၂၀၀၉ ကနေ ၂၀၁၁ အထိ ကစားခဲ့ဖူးတာကြောင့် တကယ်လို့ ရီးယဲလ်ကို ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဘာစီလိုနာနဲ့ ရီးယဲလ်နှစ်သင်းစလုံးမှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ (၃၃)ဦးမြောက် ကစားသမားဖြစ်လာမှာပါ . .
Photo:lasexta,Pro Soccer USA,YouTube
လာမယျ့ ဇနျနဝါရီမှာ Zlatan Ibrahimovic ကို ချေါဖို့ ရီးယဲလျ ပဈမှတျထားနပွေီ
ရီးယဲလျအသငျးဟာ အသငျးရဲ့ တိုကျစဈကို အားဖွညျ့ဖို့အတှကျ လာမယျ့ဇနျနဝါရီကရြငျ LA ဂလကျဆီအသငျးရဲ့ ဆှီဒငျဝါရငျ့တိုကျစဈမှူး အီဘရာဟီမိုဗဈ Zlatan Ibrahimovic ကို ချေါဖို့ စီစဉျနတေယျဆိုပွီး သတငျးတှေ ထှကျနပေါတယျ။ ရီးယဲလျအသငျးဟာ အဓိက တိုကျစဈမှူး စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ကို ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဆီ ရောငျးခပြွီးကတညျး တိုကျစဈပိုငျး အားနညျးမှုနဲ့ ရငျဆိုငျနရေပွီး ဒီရာသီမှာ ဂါရတျဘေးလျ Gareth Bale ၊ ဘနျဇီမာ Benzema ၊ မာရီယာနို Mariano ၊ အဆနျစီယို Asensio တို့ဟာ (၁၂)ပှဲကစားပွီးခြိနျမှာ အားလုံးပေါငျး (၁၈)ဂိုးသာ သှငျးထားတယျ။
လီဗနျတေးနဲ့ပှဲမတိုငျခငျ ရီးယဲလျအသငျးဟာ ဆိုးရှားတဲ့ ဂိုးပေါကျပြောကျမှု မှတျတမျးကို ပိုငျဆိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ရီးယဲလျပရိသတျတှကေ တိုကျစဈပိုငျးကို အားဖွညျ့ဖို့ တောငျးဆိုနကွေပါပွီ။ အဲဒါကွောငျ့ လာမယျ့ဒီဇငျဘာလဆိုရငျ LA ဂလကျဆီနဲ့ စာခြုပျသကျတမျးကုနျဆုံးတော့မယျ့ အီဘရာဟီမိုဗဈကို ချေါပွီး တိုကျစဈပွဿနာကို ယာယီဖွရှေငျးဖို့ ရီးယဲလျအသငျးက ဆန်ဒရှိနတောပါ။ အသကျ(၃၇)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈပမေယျ့ အကောငျးဆုံး ခွစှေမျးတှကေို ပွသနဆေဲဖွဈသူ အီဘရာဟီမိုဗဈဟာ LA ဂလကျဆီအသငျးအတှကျ (၂၆)ပှဲကစား (၂၂)ဂိုးသှငျးထားပွီး အခုလောလောဆယျ မဂြောလိဂျပွိုငျပှဲမှာ ဒုတိယသှငျးဂိုးအမြားဆုံး ကစားသမားအဖွဈ ရပျတညျနတေယျ။
အီဘရာဟီမိုဗဈဟာ ဘာစီလိုနာအသငျးမှာ ၂၀၀၉ ကနေ ၂၀၁၁ အထိ ကစားခဲ့ဖူးတာကွောငျ့ တကယျလို့ ရီးယဲလျကို ပွောငျးရှဖွေ့ဈမယျဆိုရငျ ဘာစီလိုနာနဲ့ ရီးယဲလျနှဈသငျးစလုံးမှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ (၃၃)ဦးမွောကျ ကစားသမားဖွဈလာမှာပါ . .